February 22, 2020 adminMarketingLeave a Comment on MAAHMAAHYO SOMALI AH PDF
Author: Malashura Akim
Geesi allaahay ma xilo.
Adhi jiri xil bay wadaagtaa. B Badhi badhi ku dhufo. Hadal iyo hilbaba kala qalan.
B Taxde Waddaad ah. Alle watow wehel uma baahna. Awr kala guurtay uurar kala guurey baa ka xun.
Dani waa seeto Casarkii wixii kugu dhacaa cishihii lagugu caayaa. Reerka meelan loo soomali looma haatiyo. Hooyadii ka guure habar yartii kuma negaado. Saddex la lama dego, doqon fiiro taqaan,fulay daandaansi yaqaan iyo geesi damac yaqaan.
Col iyo abaar cagahaagaa lagaga baxaa. Dumar yaryaraysi male Dacas iyo dameeraba lama kala laha. Naago waa belo loo baahan yahay. J Wax soo socda ka halloosigii. J Gabow geeri og. Naago waa u samir ama ka simir.
Log in to post comments. Matag meel kuguma simo Maska madaxaa laga dilaa.
AKHRISO Maahmaahyo Saddexleya, W/Q: Cali Cabdi Coomay “-Saddex saddex loogama maarmo ?
Isla weyn, dooro weyn. Hargaysa, Soomaalilaan Calicoomay hotmail. Fadlan si masuulnimo ah u dhiibo fikirkaaga. Nin saddex buu nin u yahay Nin naagiisuu nin u yahay Ninna maalkiisu u nin yahay Ninna afkiisa u nin yahay Bannaankaba arkaayow maxaa babac ku saaraaya Bidaari sibiq bay kugu gashaa.
Mala-duul wuu guulaystaa xin u duulse wuu guul darraystaa. Ood qaadis iyo jiidis waa isla guri geyn Bawdo rag, maalinba midbaa qaawan. Nin kaligii tashaday waa nin orgi rartay. Nin waliba waxa uu yahay ayuu ku moodaa.
Dardaaran waa inta xayga la yahay. God hadimo ha qodin, haddaad qoddana ha dheerayn, ku dhici doontaana ma ogid Nin kuu digay kuma dilin. Dhallaan qayladii waa qaboonada.
Aqoon xumo abaar ka daran qorsho xumo abaar ka daran Dantu ceebba ma lahee dadkuun baysku nacaya Dacawo duul-duul badan af libaaxeey dalaq dhahdaa. Dhalaan dheelaa baradi, dhusuntaa far koo galiyee? Ballan habeenimo, jarmaado subax buu leeyahay. Gaashaan qaad ma anbado. Fulay wax ka wadne weyn. Gardarraa ma guulaysto